Kedu ihe kachasị mkpa SEO maka nkọwa meta?
Nkọwa nke Meta ka a na-eji nye weebụsaịtị ọ bụla mmetụ dị ukwuu na ọnụọgụ-site ọnụego (CTR), n'ikpeazụ na-eme ka ntụgharị dị elu ka mma na ọkwa elu karịa na SERPs. Na òkè ọdụm nke webmasters, ọ bụghị ịkọ ndị nwe ụlọ ọrụ na-agba ọsọ ahịa, nweta nghọta doro anya nke isiokwu dum, n'agbanyeghị otú o si yie ihe ka ọtụtụ n'ime anyị. Yabụ, ka anyị hụ atụmatụ SEO kachasị mma iji tọghata nkọwa gị dị iche iche n'ime ezigbo ígwè ọrụ CTR.
Dika ntuziaka nduzi nke Moz na-ekwu, a ghaghi ịchọta ogologo nkowa nko n'ime ihe odide 150-160. Ndị otu ọkachamara na Semalt, dịka ọmụmaatụ, gwara m ihe ha chọrọ maka nkọwa meta dịka ederede 155. Ihe ọ bụla kpọmkwem bụ, nke a abụghị isi nke mkparịta ụka anyị banyere aro SEO. Banyere ogologo, ị ga-akọwa nkọwa meta dị ka nkwupụta zuru ezu iji mee ka onye ọrụ ahụ gaa n'ihu na-agụ ya. Ihe kachasị sie ike ebe a bụ ịgbalị ịkọwa nkọwa zuru ezu, nke karịrị ihe odide 160, nke a na-ewepụ ya na SERPs. Naanị zere ime ụdị ahụ.
Echere m na isi ihe nke meta akọwapụtara ebe a na-enye onye ahịa gị uru bara uru. Ma enwere ike ịbụ atụmatụ SEO, ana m ekwu maka uru ha bara. Ntughari ntughari ọ bụla kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche ma kọwaa n'ụzọ doro anya na enye onwe ya, nke ahụ bụ ihe gbasara uru ha bara uru. N'ịtụle asọmpi siri ike, ana m atụ aro ka ị tụlee otú ị ga-esi eche echiche bụ nkọwa atọ nke ndị mmempi kachasị nwee mmeri na-eji. N'ụzọ dị otú a, ide akwụkwọ nke aka gị na-anwa ịjụ ajụjụ abụọ dị mfe site na onye ọrụ. Naanị jụọ onwe gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke a ga-enye, yana maka ihe kpatara m ga-enwe pịa iji malite.
O doro anya na nkọwa nke ọ bụla na-anọchite anya mgbasa ozi gị na SERPs, ọ bụ akwụkwọ ahịa gị nke a ga-egosipụta dị n'okpuru nsonaazụ ọchụchọ kachasị ụgwọ. Ya mere, ọ na-arụrịrị ọrụ maka gị, enweghịkwa ndụmọdụ SEO ọzọ, mana ịmegharịrị nkọwa nke ọ bụla na mkpirikpi CTA (oku na-arụ ọrụ) ma ọ bụ ịnye ya n'ime ederede ya. Ime otú ahụ, ị ​​ga-enwe mmetụ dị mma na ọnụọgụ ntinye gị. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike inyere gị aka ịghọ ihe pụrụ iche ma pụọ ​​n'aka ndị mmegide - niile na otu.
Cheta na ị na-agbụrụ ọsọ ahụ megide Google AdWords, nke nwere ike iwepụta ndepụta anọ maka isi okwu gị. Nyere na ị nweere onwe gị ka ị nweta ihe bara uru nke enyi na enyi nkọwa atọ, ana m atụ aro ka ị na-elegide naanị onye mmegide gị anya iji gbanwee oge. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo nkà, mee ike gị niile iji kọwaa nkọwa gị dị ka azụmahịa. N'ụzọ dị otú ahụ, mgbasa ozi ndị akwụ ụgwọ site na Google AdWords nwere ike inyere gị aka iwepụtakwuo ụzọ-pịa. Gbalịa ime ụdị ihe ahụ - ule, nyocha, na ime mgbanwe. Naanị nyochaa ihe mmezi ọzọ ị ga-emegide Source .